Ungazilungisa njani iinwele zangaphantsi | Amadoda aQinisekileyo
Makhe sithethe ngeenwele zangaphantsi. Amanye amadoda afumanisa ukuba aphulukana nobudoda bawo ukuba achetyiwe, ngelixa abanye, besika amakhwapha abo into engcwele kwinkqubo yabo yezempilo.
Zombini ezi zikhetho zibonakala zilungile kuthi. Iinwele zekhwapha (okoko iinwele zingaveli ngokungathandekiyo phantsi kweengalo) azingcono kunamakhwapha achetyiweyo kwaye okuphambene noko, nangona inqaku lanamhlanje libhekiswe emadodeni akwiqela lesibini: abo bakhetha gcina iinwele zangaphantsi zifutshane.
Xa ukhetha indlela yokususa iinwele ezingaphantsi kwekhwapha, ingcebiso yethu kukukhetha isiklipthi seenwele okanye, kungcono kodwa, a ukucheba umzimba, kuba kuphela kwendlela esinokuthintela ngayo iipunctiki ezicaphukisayo ezenzeka kuloo ndawo xa sithambisa okanye sitsheva kwaye iingcebiso zeenwele ziqala ukuphuma kulusu.
Ubude obulungele iinwele zekhwapha Kuphakathi kwe-1,5 kunye ne-2 cm, kuncinci kancinci ukuba sineenwele ezigobileyo, okanye yintoni efanayo, amanani asezantsi e-clipper okanye i-shaver yomzimba.
Ngaphambi kokucheba iinwele kubalulekile moisten indawo ngamanzi ashushu ukuthambisa iinwele kunye nokunciphisa amathuba okukruquka okanye iinwele ezingaphakathi, kodwa khumbula ukuba amanzi kunye nezixhobo zombane azixubeki kakuhle, ke vumela imizuzu embalwa ukuba ulusu luthathe amanzi kakhulu. Khumbula ukuba into esiyifunayo kukufuma, hayi idriphu yamanzi.
Emva kokucheba, musa ukungakhathali kukhathalelo, kuba, njengoko usazi, yindawo ebuthathaka kakhulu. Faka isicelo se ibhalsam emva kokuba ingenabo utywala (kubaluleke kakhulu) kwaye, ukuba ungomnye wabo bangenakwenza ngaphandle kwesidambisi sabo, ungayifaka, kodwa ulinde imizuzu emibini okanye emithathu emva kwebhalsam. Ngosuku olulandelayo, kwaye njalo ukusukela ngoko, ungathandabuzi ukubandakanya amakhwapha kwindawo apho uthambisa khona amafutha mihla le.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Senza ntoni ngeenwele ezingaphantsi kwekhwapha?
Ungazigcina ngokufanelekileyo izihlangu zasehlotyeni inyathelo ngenyathelo